Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Michael Owen Childhood Story Plus Na-agbaghaghị Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị Na-eme Eme
LB na-egosi Full Story of a Left Back Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Nwoke ahụ Dị Ebube'. Nwa akwukwo Michael Owen Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Ntugharia ya bu ihe omuma nke ndu ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya, ndu ya na ndi ozo di iche banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere Akụkọ Ochie ma ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Michael Owen nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
A mụrụ nwa Michael James Owen na 14th nke December 1979 na Chester, United Kingdom.
Sagittarius amụrụ Owen bụ nwa nke anọ nke ndị mụrụ ya. A mụrụ ya Jeanette Owen (nne) na Terry Owen (nna). Ọ dịrị ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwata niile na-eto eto na Hawarden, Wales.
Ọ bụ nna ya mere ka ọ bụrụ football mgbe ọ dị afọ asaa, bụ onye hụrụ ya dịka onye na-eme egwuregwu kachasị mma na ezinụlọ. Dị ka onye na-eto eto Everton, Owen gara Rector Drew Primary School na Hawarden, Flintshire, n'ebe ugwu Wales. Ka ọ na-erule afọ iri, ụfọdụ n'ime ndị na-edu ndú na mba na-enyocha ọganihu ya.
Owen bụ onye egwuregwu kachasị egwu maka otu egwuregwu Deeside Area Primary School n'okpuru-11. Nke a bụ oge ọ gbajiri ihe ndekọ 20 nke Ian Rush maka otu otu site na ịlele ihe mgbaru ọsọ 97 na-agbasa n'otu oge, na-emeziwanye na ndekọ Rush site na ihe mgbaru ọsọ 25. Enyere ya onyinye maka ntozu nwata.
Mgbe ọ dị afọ 12, mgbe Owen malitere ịga ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nke a bụ oge ọ ruru eru ịbanye ụlọ akwụkwọ nwata akwụkwọ na klọb. Oge a, ndị na-egwu egwuregwu football mere njem. Clublọ isi mbụ hụrụ ya ka ọ na-egwu Deeside bụ Liverpool.
N'ezie, ọ bụ Steve Heighway, onye isi ntorobịa Liverpool na-edegara Owen akwụkwọ n'onwe ya. Njikwa ụlọ ọrụ a ejitụbeghị ụdị ịhụnanya a bịakwute nwata.
Terry Owen nna ya kwuru, sị: “[Heighway] degara anyị akwụkwọ ozi na-egbu mmụọ ma ọ bụ ịhụnanya n'anya mbụ Michael hụrụ. Ọmarịcha leta ahụ Liverpool nwere mmasị gosiri na ha hụrụ Owen n'anya site n'otu ụbọchị. ”
Otú ọ dị, tupu Owen nyere ha mbinye aka ya, ọ ga-emecha ule GCSE ya nke pụtakwara na klas ya. N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ, Owen ji obi ike na ọdịnihu ya bụ ọrụ ịgba chaa chaa na Liverpool.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Owen zutere Louise Bonsall na Rector Drew Primary School, na Hawarden, Clwyd, North Wales. Nke a bụ n'afọ 1984 mgbe Owen bụ 5 afọ. Ha abụọ ghọrọ ndị enyi ma tolite ka ha bụrụ ndị nwere afọ iri na ụma na mgbe ahụ, ndị hụrụ okenye n'anya.
A na-akpọkarị Louise Bonsall dị ka WAG ndị ga-ahọrọ ịnyịnya na akpa. Ọ bụ onye na-agba ịnyịnya. N'oge ahụ, mgbe Michael bụ ụmụ amaala na-eto eto, na-adọta uche nke Premiership scouts site na afọ iri, Louise na-agba ịnyịnya mgbe niile.
N'agbanyeghị na ị lụrụ otu n'ime ndị ịgba ama ama ama ama na mba ọtụtụ afọ gara aga, Louise Owen abụghị WAG echiche efu. Won't gaghị ahụ ka ọ na-ada na klọb abalị, ọ naghịkwa ele ịzụ ahịa na ịwa ahụ ịchọ mma dị ka egwuregwu asọmpi.
Ihe kachasị mkpa bụ ezinụlọ ya na ịnyịnya ya abụọ. Ya na di ya na-eche nche nzuzo ha - n'eziokwu, Louise esetịbeghị ajụjụ ọnụ.
Ha kwere na 14 February 2004, ma lụọ na 24 June 2005, na Carden Park Hotel na Chester, Cheshire. Di na nwunye ahụ eburu ụzọ lụọ di na nwunye n'ụlọ ha mana ha gbanwere atụmatụ mgbe a gwara ha na ọ bụrụ na enyere ikikere maka mmemme alụmdi na nwunye, a ga-enyerịrị ebe a ga-eme maka agbamakwụkwọ ndị ọzọ maka afọ atọ.
Ha kpebiri ịlụ di na nwunye na ụlọ ọrụ akwụkwọ na uwe na-ezighị ezi ma nwee obi ụtọ na-esote n'echi ya na ụlọ ha. N'okpuru ebe a bụ foto agbamakwụkwọ ha.
Di na nwunye ahụ zụtara Lower Soughton Manor na Flintshire, North Wales, ebe ọ na-edebe ụgbọala ya. Louise Bonsall hụrụ ịnyịnya n'anya.
A mụrụ nwa ha, bụ Gemma Rose, na 1 May 2003. Dị ka e kwuru na mbụ, Gemma gosipụtara na foto agbamakwụkwọ ha. Owen raara otu nwa ya nwanyị Gemma isi ihe omuma ya, "Michael Owen: Gbanyụọ Record, My Autobiography."
Na 6 February 2006, ha nwere nwa nwoke aha ya bụ James Michael. A mụrụ nwa ha nke atọ, nwa nwanyị, Emily May, na 29 October 2007. A mụrụ nwa ha nke anọ bụ Jessica na 26 February 2010. N’okpuru ebe a bụ foto nke Owen na ezinụlọ ya mara mma.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
Michael Owen si na ezinụlọ Welsh na-enwe obi ụtọ tupu ndị uwe ojii akwụ ụgwọ. N'okpuru ebe a, foto 1998 nke Owen n'ụlọ ya na ezinụlọ ya (nna, obere nwanne na Andrew nwanne ya okenye) na North Wales.
Na mkpokọta, o nwere ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị abụọ. Hismụnne ya bụ Andrew Owen, Terry Junior, Karen Owen na Lesley Partridge. A hụrụ Owen mgbe niile dị ka nwa nna ya kachasị amasị ya bụ onye ya onwe ya bụbu ọkachamara n'ịgba ọsọ na ịgba egwu maka klọb dị ka Chester City na Everton (onye na-asọpụrụ Liverpool nwa ya nwoke).
N'okpuru bụ foto nke Jeanette Owen (n'isi isi aka ekpe) bụ nne dị mpako nke Michael Owen.
Owen zụtara otu okporo ámá dum maka ezinụlọ ya na Ewloe, nke dị nso na ebe ọ bi.
N'ikwu nke a, Na 2004, ndị ntorobịa abụọ wakporo Kawen nwanne Owen, bụ ndị nwara ịtọrọ ya. Mgbe o kpughere na ya di ime, ha gbapuru. N'ikpeazụ, Owen bụ ọgọ nke ndị na-agba ọsọ ndụ ezumike nká Richie Partridge.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Post Madrid Ọzụzụ Pilot
Mgbe Owen laghachiri na UK site na Real Madrid ka ọ kpọọ Newcastle, ọ gara ebe dị nso BAE kwa ụbọchị iji fee, site na helikopta, iji zụọ ụlọ ọrụ ya. Nke a gosipụtara oke ọgaranya ya.
Ejiri helipad emebere n'ime ala nke ụlọ Owen na klọb ya iji nweta helikopta mara mma nke ya na ya na-eso ma jiri ya zụọ ịbụ onye ọkwọ ụgbọ elu.
A machibidoro Owen ọzụzụ site na nhazi Newcastle United na-eduzi ụgbọelu site na nnyefe mkpuchi buru ibu.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Personality
Michael Owen nwere àgwà ndị a n'àgwà ọma ya.
Ike: O doro anya na ọ mara mma, na-emesapụ aka, na-eme ezigbo ihe, na-enwekwa ọchị.
Ajọ: O nwere ike ikwe nkwa karịa ike ịnapụta, na-enweghị ndidi ma kwuo ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkwa.
Sagittarius nwere mmasị: Owen hụrụ Freedom, njem, nkà ihe ọmụma na ịbụ n'èzí.
Sagittarius anaghị achọ: Owen adịghị achọ ịrapara mmadụ n'ahụ, ebe ọ na-egbochi ya.
Karịsịa, o nwere ike ịgbanwe echiche ya dị ka ihe dị iche iche ma mee ihe ọ bụla iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ya.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Mbugharị na Nwoke Inyinya
Na Eprel 2013, Owen, ya na onye bụbu Formula One onye ọkwọ ụgbọ ala Mark Webber, zụrụ obere osisi na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta Sportlobster. Owen nwere ọtụtụ ụgbọala. E gosipụtara ịhụnanya ya maka ụgbọala egwuregwu mgbe ọ na Wayne Rooney enwere oge ịkwọ ụgbọala na afọ.
Owen na-enwekwa ọ horseụ ịnyịnya nke mụrụ àgwà ịgba chaa chaa ya. O nwere ọtụtụ ịgba ọsọ, nke Tom Dascombe zụrụ. Ọ zụrụ ịnyịnya Brown Panther nke meriri nnukwu agbụrụ na Royal Ascot na 2011.
Michael Owen Child Story Plus Ihe Na - adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Onye ngosi TV
Owen gwakwara onwe ya na ihe ngosi ihe nkiri ụmụaka Hero na Zero. N'ime usoro ihe omume ahụ, Owen ga-apụta site na ọkwa zuru oke nke ụlọ Charlie Brice iji nye ndụmọdụ n'oge nsogbu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Michael Owen Child Story akụkọ ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Ifiedbọchị agbanwee: November 2, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 8, 2020
Nwa Andy Carroll Akụkọ nke Na-enweghị Ihe Ọ Bụla